श्रीमती जागिरे होस्, घरको काम आफैँ गर्छु |
श्रीमती जागिरे होस्, घरको काम आफैँ गर्छु
प्रकाशित मिति :2016-12-14 10:47:18
आफ्नो हुनेवाला जिवनसाथी कस्तो होस् भन्ने चाहना राख्छन आम युवती ? पक्कै हेर्दा लायकको, पढेलेखेको, आफ्नो खुट्टामा उभिएको आदिआदि । ठिक विपरित युवाहरू कस्ती युवती आफ्नो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहन्छन होला ? हेर्दा चट्ट राम्री, शरीर मिलेकी……तर यति मात्रै होइन । अहिले हेर्दा अनुहार मात्र राम्रो भएका युवती भन्दा पनि आत्मनिर्भर युवती खोज्ने पुरुषको संख्या बढ्न थालेको छ । केही दिनअघि एकजना आफन्तको बिहे लागि केटी हेर्न गए । केटीको घरपरिवार, आफन्त सबै राम्रो थियो खोट लगाउने ठाउँ कहीँ थिएन । युवती पनि उनले चाहेको भन्दा धेरै राम्री थिइन्, तरपनि उनी बिहेको लागि राजी हुन सकेनन् । अरु सबै ठिकै रहेछ, तर केटीले जागिर खाएकी रहिनछन्, अनुहार मात्र हेरेर के गर्नु, रुप होइन आफ्ना खुट्टामा उभिएका केटी पाएमात्र बिहे गर्ने भनेर उनीहरू बाहिरिए । केटीका आफन्तलाई जागिर खाएको नखाएको बारेमा सोध्दा कानेखुसी गरेको पनि सुने उनले । जागिरे हुँ भन्छन् पाल्न नसक्ने भए किन बिहे गर्न आँट्नु नि ? सिधै केटी जागिरे हो कि होइन भन्छन् बा केटीकी फुपुले साउती गरेको सुनिहाले । अहिलेको यो महँगीको जमानामा एकजनाको कमाइले केही चल्दैन, पुग्दैन त्यसैले एकवर्ष ढिलो होस्, तर आफ्नो खुट्टामा उभिएकी केटी पाएपछि मात्र बिहे गर्ने निर्णय छ उनको ।
यी आफन्त मात्रै होइन अहिलेका अधिकांश दुःख गरेर सहर छिरेका युवाको चाहना आत्मनिर्भर सहयात्री रोज्नेतर्फ नै देखिन्छ । आर्थिक रुपमा मात्रै होइन सामाजिक र पारिवारिक रुपमा पनि यो रोजाइले धेरै फरक पारेको छ । दुवैजना जागिरे भएकालाई हेर्ने नजर र श्रीमानको कमाइ खाएर बसेका श्रीमतीलाई हेर्ने नजरमा धेरै फरक छ ।
अलि राम्रोसँग पढ है नानी हो, अहिलेको जमानामा राम्रोसँग पढिएन भने जागिर पाईंदैन, जागिर नभएका केटीलाई कसैले बिहे गर्दैन । भर्खर आइकम पढ्दै गर्दा डिल्लीबजार कन्या क्याम्पसमा गुरुले सिकाएको यो वाक्य कानमा गुन्जिरहन्छ । सरले किन यस्तो भन्नुभो होला भन्ने लाग्थ्यो, अर्काको घरजाने जात हो पाल्न सक्नेले लगिहाल्छ नि सर एकजना साथीले बिचैमा कुरा खुस्काँउदा सरले दिएको लामो ‘लेक्चर’ निकै रोचक लाग्छ अहिलेपनि । यही सोचाइका कारण तिम्रा आमा हजुरआमाहरू पछि परे, राजधानीमा पढ्न आएका छोरीमा समेत त्यही गुण छ कमसेकम श्रीमानले मलाई पाल्ने होइन म श्रीमानलाई पाल्न सक्छु भन्ने आँट त गर न ! सरको यो वाणी कहिल्यै विर्सन सकिँदैन । श्रीमानले खल्तीबाट पैसा निकालरे दिँदा यति पैसाले पुर्‍याउनु म सँग पैसासैसा छैन जसरी चलाउनुपर्छ चलाउनु भन्दा मनमा इख आउँछ कि आउँदैन ? भोली मैले यसैगरी कमाएर श्रीमानको हातमा यति पैसा छ जे मन लाग्छ किनेर लगाउनु भनेर दिँदा कस्तो होला ? सोच त ? सरको यही बाक्यले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिकायो र आत्मनिर्भर भएपछि कसैसँग हेपिनुपर्ने रहेनछ भन्ने ज्ञान पनि दिलायो ।
घरमा छोराको बिहेको चर्चा चलेको ३ वर्ष पुगसक्यो तैपनि लगन जुरेको छैन । यसपटकको मंसिरमा जसरी पनि जेठी बुहार भित्र्याउने आमा बुवाको रहर र दवाव दुवै छ छोरामाथि । छोरा सरकारी जागिरे हुन प्राविधिक लाइनका अफिसरस्तरका । आमाबुवाले दर्जन भन्दा धेरै केटीका कुरा ल्याइसके होलान तरपनि उनलाई चित्त बुझेको छैन । रुप हेरेर राम्रो नराम्रो भएकोले होइन प्राविधिक कारणले, उनले आफन्तसँग सँधै यही भन्ने गरेका छन् । जस्ता केटीका कुरा ल्याउँदा पनि हुँदैन भन्छ , अव कस्ता खोज्नेहोस् आफै खोज बा आमा उनीसँग झर्किन थालेका छन् । आफैले कतै मन पराएको छ कि भन्दा छैन भन्छ । आमा बुवाले आफन्तले कुरा ल्याएको ठाऊँमा कहिल्यै हुन्छ भन्दैन । आमाबुवाको एउटै गुनासो तीनर्षदेखि दोहोरिएको छ । उनले आमाबुवालाई धेरै सम्झाएका छन्, राजधानीको ठाउँ, एउटाको कमाइले केही पनि हुँदैन, महँगीले आकाश छोइसक्यो । दुईजनाको कमाइ भयो भने कमसेकम जिविका चलाउन त कठिन पर्दैन । जागिरे केटी होस् आफ्नो खुट्टामा उभिएकी बरु घरको सबै काम मै गर्छु, अहिलेपनि काठमाडांैमा बस्दा आफ्नो कोठाको सारा धन्दा भ्याएकै छु मलाई केही फरक पर्दैन ।
उनको यो भनाईमा आमाबुवा धेरै खुसी छैनन् । सोझा केटी बिहे गर्नुपर्छ, आफूले भनेको मान्छन् भन्दा छोराले टेर्दैनन् । अहिले जागिरे केटी खोज भोली त्यही जागिरेवालीले दवाएर राख्छे थाहा पाउलास् उनलाई आमा दिदीहरूले प्रायः यसै भन्ने गरेका छन् । जागिर खाएकी बुहारी घरमा भित्रीइ भने उसले आाफ्नो छोरो, भाइलाई दवाएर राख्छे, आफ्नो बसमा चलाउछे, जोइटिग्रें बनाउछे, भन्ने मानसिकताले ती युवाका आफन्तलाई पेलिरहेको छ । आत्मनिर्भर केटी खोज्ने छोरोले दुईजनाको जागिर भयो भने जिविका चलाउन सहज हुने सोच्नु र सोझी केटीलाई बुहारी बनाउन पाए छोराले सुख पाउँथ्यो, हेपिदैनथ्यो, सासु ससुराको राम्रो स्याहार हुन्थ्यो भन्ने आमाबुवाको चाहनाको बिचमा के अन्तर देखिन्छ ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
छोरो गाउँ छाडेर सहरमा छिर्‍यो, आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिक्यो, उसलाई महिला र पुरुषले यो गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने मतलव छैन । उसलाई सहर खर्चिलो छ, यहाँ टिक्नको लागि महिला पुरुष दुवैले संघर्ष गर्नुपर्छ एकल कमाइबाट जिवन धान्न मुस्किल पर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ र त ऊ आत्मनिर्भर केटी आफ्नो जिवनसाथी होस भन्ने कल्पना गर्छ । तर गाउँका सोझा आमाबुवाको लागि घर लिपपोत गर्ने, गोठको धन्दा गर्ने, मेलापात गर्ने, सासुससुराको स्याहार सुसार गर्ने सोझी बुहारीको चाहना हुन्छ । यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन, समयको सवक पनि हो । हाम्रा आमा हजुरआमाले जे सिक्नुभयो त्यही कुरा हामीलाई सुनाउनुहुन्छ , उहाँहरूका सबैकुरा हुबहु लागू गर्नैपर्छ, हुनैपर्छ भन्नेपनि केही छैन । मनन गर्ने र निर्णय लिने फरक कुरा हो ।
बुहारीको कमाइ खाँदा मख्ख पर्ने सासुससुराको मुहारमा अर्कै चमक देखिन्छ । बुहारीले कमाएर दिएको छोराले दिएको भन्दा बढी मूल्यवान हुँदोरहेछ यो स्वयं आफ्नै अनुभवले सिकाएको पाठ हो । मेरा सासुससुराले कहिल्यैपनि बुहारीले जागिर नखाओस भन्नु भएन । अझै असी वर्ष उमेर पुगेकी हजुरआमाले जाँचको बेलामा घरधन्दा आफूले गरेर पढ्न समय दिनुहुन्छ । श्रीमानबाट कहिल्यै दवाव आएन र अहिलेसम्म आफू हेपिनुपरेको पनि छैन ।
सबैका घरपरिवारले यस्तै स्वच्छ चाहना राख्ने हो भने महिलाले म श्रीमती हुँ, म बुहारी हुँ बुहारी भएकोले यो गर्नुहुन्छ गर्नुहुँदैन भन्ने भावना आउने थिएन । आत्मनिर्भर श्रीमती, आत्मनिर्भर बुुहारी बनाउनेतर्फ घरपरिवारले सहयोग गर्ने हो भने घरपरिवार चलाउन मात्रै होइन परिवार खुसी राख्न पनि सजिलो हुन्छ , हिंसा पनि कम हुन्छ ।